Qaar ka mid ah qoysaska soomaalida Göteborg oo ka cabanaya guryo la’aan | Somaliska
Qaar ka mid ah qoysaska soomaalida Göteborg oo ka cabanaya guryo la’aan
Haddii aad tahay qof ku cusub dalka Iswiidhan waxaa suuragal ah inaadan si sahlan ku helin guri. Taasi keligaa ma ahan oo xaaladda guryo xumadda ah waxaa kula qaba dad aad u faro badan oo qaarkood heeysta dhaqaale iyo shaqo ay ku maareeyn karaan kirada guriga iyo masaariifta kaleba, balse nasiib darro ay ku adag tahay ineey helaan guri.
Saas oo ay tahayna waxaa jira da daalo badan oo ay dowladu iyo maamulka gobolka Göteborg ku doonayaan ineey xal u helaan guryo la’aanta baahsan ee misna sida gaarka ah u saameeyneysa soo galootiga wadanka ku cusub oo soomaalida ka mid tahay. Waxaa labbo jibaarmay sanadkii hore mudadda dheer ee safka loogu jiro in la helo guri taas oo ay qaadaneeyso inta u dhaxeeysa saddex sanno ilaa sideed sanno. Xaafadaha qaar ayaa dadka waxaa ay safka ugu jirayaan in ka badan toddobo sanno, waana mida keentay in qaar badan ay ku fekeraan sideey uga guuri lahaayeen oo tuulooyinka ku heereeysan ugu guuri lahaayeen.
Xaawo Cabi Jimcaale, waxaa ka soo guurtay Waqooyiga Sweden oo ay joogtay muddo labbo sano ah, halkaas oo ay ku heeysatay guri magaceeda ku qoran. Nasiib darro cidlo iyo qabowga ka jira qeybaha waqooyi awgiis waxaa bartanka kaga soo dhacday magaaladda Göteborg oo si dirqi ah ku heshay guri gacan labaad ah. Waxaase wiisha ku yeeray markii bilooyin ka dib uu wiilkii ay qaraabada ahaayeen u sheegay in gurigiisa doonayo si dhaqsahana loogu firaaqeeyo maadama uu qorsheeynayo inuu dhawaan ku aqal galo. Xaawa Cabdi oo aan kulanay xaafadda Biskopsgården ee degmadda Hisingen ee Göteborg ayaa iyadoo walaac ka muuqda u sheegtay Somaliska.com, dhibaatada guryo la’aanta ku heeyso iyo sideey u adag tahay ineey hesho guri gacan labaad ah xilli ay baahi weeyni u qabto.
Xaawo oo saddex carruura leh ayaa dagan magaaladda Göteborg muddo ka badan lix bolood, ka sakow baahida guri l’aanta ah ee heeysata waxaa ay farta ku fiiqday in ay weli la daala dhaceeyso la qabshada magaaladan weyn iyo nolosheeda adag. Haatana ay ku qasban tahay ineey xafiiska ceeyrta hor dhigato boorsooyinkeeda si ay u dejiyaan guri ku meel gaar ah. Taasoo aan qudheeda la hubin ineey suuragaleeyso.
“Waxaan maqli jiray miro gunta ku jira miro geed saaraan ma loo daadsho, guri waaban heeystay ma aqana waxa iga soo sal kiciyey” ayey tiri Xaawo oo u muuqata qof ka shaleeysay sida fudud ee ay uga soo carartay gobolkii ay daganeeyd ee Skellefteå ee Waqooyiga bari, hakaasoo ay tilmaamtay ineey ku heeysatay hooy iyo nolol ka wel wel yar midda maanta ku heeysata magaaladda Göteborg. Balse danta ku kalifay ineey iska celiso gurigeedii kana soo cararto tahay qabowga oo ay la qabsan weeyday iyada iyo carruurteeda.
Ugu dambeyntii Xaawo ayaan ogeeyn sideey xaalkeeda noqon doono marba hadeeysan laheyn qaraabo aan wiilkaas isaga laftiisa ka ceeyrsaday gurigiisa, jirina cid kale oo xitaa soomaalinimo uga kireeyneysa gacan labaad. Xaawo waxaa ay la mid tahay boqolaal qof oo soomaali ah oo guriyo la’aan ku heeyso nagaalooyinka waa weeyn ee dalkaan.
Dhawaan ayey aheyd markii shabadda Somaliska.com la kulantay hooyo soomaaliyeed oo iyadana ka guurtay cirifka waqooyi ee magaaladda Kiruna oo iyada iyo carruurteeda guri la’aan ku heeyso Göteborg, islamarkaasina qorsheeyneysa siddii ay markale dib ugu laaban laheyd Kiruna waloow daruufihii ku qasbay ineey kaga soo tagaan ay halkeedii yihiin.
DEG DEG: Walaac ka taagan xaafadda Rinkeby ka dib markii booliska halkaasi lugu dhagaxyeeyey